Golaha Shacabka oo ansixiyay in gobolka Banaadir 13 kursi…
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in Gobolka Banaadir 13 Senator laga siiyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Kulanka oo doob badan ka taagneed furitaankiisa waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyada oo doob badan ka dhalatay ajandayaasha laga doodayo oo maanta aad xasaasi u ahaa.
Ajendaha kulanka ayaa ah dhameystirka xeerka matalaada gobolka banaadir iyo hor imaatinka Golaha Shacabka ee guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yaray.
Kalfadhiga ayaa waxaa xaadiray 146 Xildhibaan oo ka tirsan Golaha shacabka.
Lasoco wixi ka soo kordha.